Tangazve yako Mac's Bluetooth module kana uine matambudziko ekubatanidza | Ndinobva mac
Zvichida une zvishandiso zvakati wandei zvakabatana neBluetooth zuva nezuva, ungatombozvirangarira, nekuti wakavabatanidza kekutanga, uye havana kukonzera matambudziko kubva ipapo. Tiri kutaura nezve keyboards, mbeva, trackpads kana maspika, pakati pevamwe. Asi Kana vakatanga kuva nedambudziko rekubatanidza, izvo zvisingaite paMac, ungangoda kumisazve module yeBluetooth.
Usati waita nhanho iyi, tinokurudzira kuti ubvise periipher iyo yakabatana, kusvika pakubvisa simba, kungave magetsi kana mbiru uye kuibatidza zvakare kuti ione kubatana kwayo. Kana ikasagadzirisa, tevera nhanho idzi.
Pakutanga, yeuka kuti iyo keyboard ye iMac kana Mac mini inogona kusunganidzwa neBluetooth, pamwe negonzo kana Trackpad. Saka, iwe unofanirwa kuve nekutsiva kweizvi zvinongedzo, mune ino kesi nekambani tambo, nekuti panguva yekutangazve ivo vanenge vasiri pamhepo. Kana iwe wafunga izvi, wagadzirira kutangazve.
Kutanga, chiratidzo cheBluetooth chinofanira kuoneka mune yemenu bar. Kana usina, kukumbira icho iwe unofanirwa kuita anotevera matanho:
Enda ku Zvido zvemaitiro.
Muhwindo re-pop-up, chengeta pane sarudzo inowanika pasi: Ratidza Bluetooth mumenu bar. Chiratidzo cheBluetooth chinofanira zvino kuoneka pane yebasa rebasa.
Ipapo unofanira kumbira yakavanzwa Bluetooth menyu. Nekiyi dzeShift uye Option (alt) dzakadzvanywa, sarudza chiratidzo cheBluetooth kubva kubhawa yemenu.
Bvisa makiyi uye iwe uchaona iyo yakavanzwa menyu.
Fambisa iyo sarudzo Debug.
Sarudza sarudzo Dzorerazve module yeBluetooth.
Pakupedzisira, tangazve yako Mac.
Pakangodzoreredzwa, chero matambudziko ekutaurirana pakati pemidziyo anofanira kunge akagadziriswa.
Iyo Debug menyu ine zvimwe zviviri zvingasarudzwa zvatinozotaura nezvazvo: Dzorerazve kumagadzirirwo efekitori pane ese akabatana Apple zvishandiso Mune ino kesi, ndokumbira udzorere zvese Apple zvishongedzo kumafekitori marongero. Iyi sarudzo inonakidza, kana iwe waita nhanho dzakapfuura usingabudirire.
Pakupedzisira, Delete zvese zvishandiso, Inobatsira kana tichida kusabatanidza zvese zvishandiso, nekuda kwematambudziko ekubatanidza kana kuzvibatanidza kune imwe Mac iri padyo uye kudzivirira kupindira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Tangazve yako Mac's Bluetooth module kana uine matambudziko ekubatanidza
Iyo keyboard haishande kwandiri, kana iyo mbeva. Ndingaite sei kuti ndiwane iyo debug menyu kana ndisingakwanise kutaipa (alt-sarudzo) padhuze na (Chivabvu)?
Elena Fdez. akadaro
Uye kana iyo sarudzo yeBluetooth ikanyangarika kubva pane iyo yekufarira pani ????
Pindura kuna Elena Fdez.
Andres Saldarriaga akadaro
Yangu imac inoerekana yabvisa bluetooth uye kwenguva dzinoverengeka pazuva… unoziva here kuti nei izvozvo zvichiitika?
Pindura kuna Andrés Saldarriaga
Bluetooth isingawanike yakazviratidza kwandiri, asi haina kundiratidza iyo debug sarudzo neiyo nzira pfupi, pane imwe nzira here?
Norbey Felipe Lopez Avila akadaro
Masikati akanaka shamwari, vakakupa ruzivo nezve mhinduro yedambudziko iri? izvozvo zvinoitika kwandiri zvakare.
Pindura Norbey Felipe Lopez Avila
Luis Sanda akadaro
Mhoroi, inoti Bluetooth HAIWANIKO, asi haina kundiratidza iyo debug sarudzo, pane imwe nzira? Ndatenda
Pindura Luis Sanda
Ko kana Apple isingauye zvigadzirwa zvehardware munaKurume 27?
Tinogona ikozvino kushandisa Apple Kubhadhara kuchengetera yedu Model 3